UZekariya 8 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
2 UtshoUtsho uYehova wemikhosi ukuthi, Ndinekhwele, ikhwele elikhulu, ngeZiyon; ndinekhwele, ndinobushushu obukhulu ngayo.
3 UtshoUtsho uYehova ukuthi, Ndiyibuyele iZiyon; ndiya kuhlala ke phakathiphakathi kweYerusalem, kuthiwe iYerusalemiYerusalem ngumzi wenyaniso; nentaba kaYehova wemikhosi kuthiwe yintaba engcwele.
4 UtshoUtsho uYehova wemikhosi ukuthi, Kusaya kuhlala amadodaamadoda amakhulu neentokazi ezinkulu ezitratweni zaseYerusalem, elowo ephethe umsimelelo wakhe ngesandla, ngenxa yobudala babo;
6 UtshoUtsho uYehova wemikhosi ukuthi, Ukuba kuyinto engummangaliso emehlweni amasalela aba bantu ngaloo mihla, kuya kuba yinto engummangaliso yini na nasemehlweni am? UtshoUtsho uYehova wemikhosi.
7 UtshoUtsho uYehova wemikhosi ukuthi, Yabonani, ndiya kubasindisa abantu bam elizweni lokuphuma kwelanga, naselizweni lokutshona kwalo.
8 Ndobazisa, bahlale phakathiphakathi kweYerusalem, babe ngabantu bam, ndibe nguThixonguThixo wabo, ngenyanisongenyaniso nangobulungisa.
9 UtshoUtsho uYehova wemikhosi ukuthi, IzandlaIzandla zenu mazomelele, nina bawevayo la mazwi ngale mihla, ephuma emlonyeni wabaprofeti, ababekho mhlenikweni yasekwayo indluindlu kaYehova wemikosi, itempileitempile, ukuze yakhiweyakhiwe.
11 Ngoku ke andiyi kuba njengokwemihla yamandulo kumasalela aba bantu; utshoutsho uYehova wemikhosi.
12 Kobakho imbewuimbewu yoxolo; umdiliya wonika isiqhamo sawo, nelizwe linike indyebo yalo, nezulu linike umbetheumbethe walo; zonke ezo zinto ndizidlise ilifa amasalela abantu.
13 Kothi, njengoko benilutshabhiso ezintlangeni, ndlu kaYuda, nani ndlu kaSirayeli, ndenjenjalo ukunisindisa, nibe yintsikelelo; musani ukoyika, mazomelele izandlaizandla zenu.
14 Ngokuba utshoutsho uYehova wemikhosi ukuthi, Njengoko ndankqangiyelayo ukwenza ububi kuni, oko ooyihlo bandenza ndaba noburhalarhume, utshoutsho uYehova wemikhosi, andazohlwaya ke:
16 Nanzi iindawo enothi nizenze zona: Thethani inyaniso elowo kummelwane wakhe; gwebani ngenyanisongenyaniso nangesigwebo soxolo emasangweni enu.
17 Musani ukucinga okubi, elowo ngommelwane wakhe entliziyweni yakhe; ningathandi ukufunga ngobuxoki; ngokuba konke oko; koko ndikuthiyileyo; utshoutsho uYehova.
19 UtshoUtsho uYehova wemikhosi ukuthi, Uzilo lweyesine inyanga, nozilo lweyesihlanu, nozilo lweyesixhenxe, nozilo lweyeshumi, luya kuba yimihlali, nemivuyo, namaxesha emisiweyo okuchwayitha, kwindlu kaYuda; ke thandani inyaniso noxolo.
20 UtshoUtsho uYehova wemikhosi ukuthi, Kusaya kuza izizwe, nabemi bemizi emininzi.
21 Baya kuhamba abemi bomnye baye komnye, bathi, Masihambe siye kumbongoza uYehova, simquqele uYehova wemikhosi; bathi abo, Siya kuhamba nathinathi.
22 IzizweIzizwe ezininziezininzi neentlanga ezinamandla ziya kuza kumquqela uYehova wemikhosi eYerusalem, zimbongoze uYehova.
23 UtshoUtsho uYehova wemikhosi ukuthi, Ngezo mini aya kuthi abambe amadodaamadoda alishumi asezilwimini zonke zeentlanga, abambe esondweni lengubo yendoda engumYuda, athi, Siya kuhamba nani, ngokuba sivile ukuba uThixouThixo unani.
IGenesis 12:2, 17:8, 18:14
IDuteronomi 26:19, 30:3, 33:28
2 Kumkani 25:1, 25
EyokuQala yeziKronike 12:19
2 yeziKronike 11:16, 15:5, 7, 9
UEzra 5:1, 2
UEstere 8:17, 9:22
IiNdumiso 2:6, 34:15, 67:7, 68:30, 79:4, 101:3, 147:2
UIsaya 1:26, 2:3, 11:9, 11, 12, 19:24, 32:16, 35:3, 45:14, 55:5, 65:20
NguYeremiya 14:9, 29:11, 18, 30:19, 22, 31:6, 12, 13, 28, 52:6
UHezekile 11:17, 18:8, 24:1, 34:26, 27, 28, 36:9, 33, 48:35
UHoseya 2:21, 22, 11:10, 11
UZefaniya 3:13, 16, 20
UHagayi 1:6, 2:4, 5, 15, 19
UZekariya 1:2, 14, 16, 2:8, 5:3, 7:3, 5, 10, 13:9, 14:10, 16, 20
UMateyu 19:26, 24:31
Izenzo zaBapostile 15:17
1 KwabaseKorinte 14:25